Dahaarka darajooyinka Shirkadaha budada mica iyo Soosaarayaasha - Shiinaha Soosaarayaasha budada mica budada ah
Huajing oo ah qoyaanka fasalka maaddada budada ah ee loo yaqaan 'micj flake mica flake mica flake mica' oo ka socda Lingshou Lubaishan Mineral, Gobolka Hebei.Waxaa soo saaray dhaqameed burburinaysa kala-soocida hawada iyo geedi socodka shiidi qoynta siday u kala horreeyaan. .
Mashiinka macmalka ah ee loo yaqaan 'Huajing' mica synthetic synthetic used a hand-made synthesis flake, untrawhite and bright.It waxaa si weyn loogu dabaqi karaa daaha dhamaadka-sare, marka lagu daro astaamaha budada mica-da dabiiciga ah, iska caabinta kuleylka ayaa kordhi kara ilaa 1200 ℃, nadiif ahaanshuhu wuxuu noqon karaa 99.9% , adkeysiga mugga ayaa aad uga sarreeya mica dabiiciga ah.
Huajing phlogopite fasalka dahaarka ayaa ka yimid Inner Mongolia iyo Xinjiang. Wax soo saarku badanaa wuxuu ku habboon yahay daahannada culus ee ka hortagga daroogada, taas oo natiijo wanaagsan ka heli karta dhuumaha saliidda, rinjiyeyaasha marinnada, gawaarida gawaarida gawaarida, iyo qalabka dhismaha biraha xeebta anticorrosion. Intaa waxaa dheer, berrinka daahan heerkulka sarreeya, waxay la qabsan kartaa ilaa deegaanka dahaadhka gaarka ah ee heerkulka sare & cadaadiska tan iyo inta ku habboon sifooyinka halabuurka.
Huajing fasalka daahan ee budada Muscovite wuxuu isticmaalay mica flake oo ka yimid Lingshou Lubaishan Mineral, Gobolka Hebei. Micco-ga dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Muscovite mica' wuxuu ku shaqeeyaa door firfircoon noocyo kala duwan oo daahan ah tan iyo markii laga faa'iidaystay dhaqaalaha.
Budada mica qalalan waxay ku habboon tahay calaamadeynta wadada, dhismaha rinjiga derbiga dibedda, malaas, dahaadhka ka hortagga daxalka, iwm. Waxay si hufan ugu ciyaari kartaa faa iidooyinka qaab dhismeedka maaddada laba-cabbir leh, hagaajinta astaamaha farsamada ee filimka daboolka, iyo ka-hortagga dildilaaca Shaqada u gaarka ah ee kahortaga UV waxay hagaajin kartaa awooda cimilada ee lakabyada.
Mica wuxuu inta badan ku dhex cadeeyaa habka loo yaqaan 'monoclinal crystal system', taas oo ah khafiif khafiif ah oo khafiif ah, xoqan, platy, iyo mararka qaarkood tiirarka pseudohexagonal. ka kooban maadada birta, taas oo laga soo qaadi karo heerka caadiga ah ee caadiga ah ama dhexdhexaadka ah, waxaana lagu rakibi karaa bir danab